Manchester City Oo Ka Badisay Newcastle United, Ciyaar Leeska Dhaliyay 7 Gool,
HomeFalanqeynta KulamadaManchester City oo ka badisay Newcastle United, Ciyaar leeska dhaliyay 7 gool,
May 15, 2021 Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
kooxda Newcastle United oo garoonkeeda ku soo dhaweesay kooxda hanatay horyaalka sanadkan ee Manchester City iyadoo kala kulantay guul daro ciyaar ku soo dhamaatay 3-4 oo labada dhinac ay soo bandhigeen ciyaar xiiso leh.
Man City ayaa guusha kulankan uga dhigan in ay sii dheereesato hogaanka horyaalka Premier leage iyagoo leh 83 dhibcood halka Newcastle united ay gashay kaalinta 16aad iyagoo leh 39 dhibcood.
Daqiiqadii 25aad Newscastle united ayaa hogaanka qabatay waxana u dhiibay Emil Krafth kubad uu madax ku dhaliyay.
Daqiiqadii 39 Man city ayaa bareejeesay waxana u dhaliyay Joao Cancelo isagoo caawin ka helay Rodri.
Daqiiqadii 42aad Ferran Torres ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa kubad lasoo qaaday ayuuna ku dhameestiray lugta.
Daqiiqadii 45+7aad Joelinton ayaa gool rigoore ah u dhaliyay Newcastle united isagoo ciyaarta ka dhigay 2-2 waxana lagu kala nastay bar-baro.
Daqiiqadii 62aad Joelinton ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Newcastle united isagoo qasaariyay rigoore loo dhigay lakin kubada uu soo baxshay goolhayaha ayuu dib ugu celiyay.
Daqiiqadii 63aad Ferran Torres ayaa ciyaarta ka dhigay 3-3 isagoo dhameestiray kubad banaanka loo soo dhigay.
Daqiiqadii 66aad Ferran Torres ayaa dhaliyay goolkiisa Saddexaad ahaana goolka 4aad ee ciyaarta guud ahaan kulankan ayaa ku soo dhamaaday 3-4.
Natiijada ayaa ka dhigan in Man city ay leedahay 83 dhibcood waxana ay kulankeeda xiga la ciyaaridoontaa kooxda Brighton.